SONY Handycam with Projector 100 % New Mingalardon (မဂၤလာဒံု) Home | 24 Naryee
Sony Handycam ရဲ့ Specifications တွေ ကတော့
ပိရိုဂျက်တာ လေးပါလို့ ပေ ၁၀၀ အကျယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ ရိုက်ကူးထားတာတွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ် အပြင် Inputတွေပါရတယ် လေ
ကွန်ပျုတာလပ်တော့တို့ Blu-Ray စက်တို့ ဖုန်းတို့ ကနေ HDMI out ကနေ ပြန်ကြည့်လို့တယ်ဗျ
Full HD နော်
Full HD Video 1920×1080P ကို ၅နာရီကြာအချိန်ဆက်တိုက်ကြီး ရိုက်လို့ ရတယ် နော်
Internal 64GB ပါ SD card 256 ထိရ နိုင်တယ်
64GB 1080 P 5Hr. 1080 i 7Hr.
Handycam တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ အားသာချက်ကတော့ DSLRတွေ လို Videoရိုက်ရင် နားရိုက်စရာ
Photo အနေနဲ့ 20 Mega Pixel ပေးထားပေးတယ်
Video ရိုက်နေရင်းလည်း Photo လှမ်းရိုက်လို့ရသေးတယ်
Photo အတွက် 20X Video 24X Digital 160X
Tele နဲ့ Wide Len တွေလည်းတပ်လို့ရတယ်နော်
Build In Flash မီးကလေးလဲပါလို့ Photo ရော
Build in 5.1 Micနဲ့ Surround အသံစနစ်လဲပါတယ်
External Flash တွေ Interview Microphoneတွေ
တပ်လို့ ရအောင် Shoe တခုလည်းပါသေးတယ်နော်
External Mic နဲ့ Earphone Jack လည်းပါတယ်
Clear Fine Touch LCD 3.0 လက်မ ပါပြီး Camera Control အားလုံး ကို Touch နဲ့ ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်
LCD ပါဝါသက်သာချင်ရင်တော့ ကြည်တောက်ရှင်း
Electronic View Finder ပါသေးတယ်ဗျ
Manual Control ခလုပ်တခုလည်းပါလို့ Iris.White Balance.Shutter Speed. Explosure တို့ကိုလည်း ကြိုက်သလို ချိန်လို့ရသေးတယ်နော်
ကဲ Pro Full HD Video Camera တလုံးအတိုင်းကို စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး လိုသလိုရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ကင်မရာလေးကို အမြန်ရယူလိုက်ပါ
စိတ်ဝင်စား ရင်တော့ Messenger သို့မဟုတ်
Ph 09441324893 ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၁၀ % ငွေပေးချေပါ က အိမ်အရောက်ပို့ပေးမည် CB သို့ Wave
နယ် မြို့များသို့ CB pay သို့မဟုတ် Wave ဖြင့် ငွေလွဲပါက အရောက်ပို့ပေးပါသည်